अनन्तिम गुरु: वासुदा
यस्तै असार महिनामै खबर पाएको थिएँ, बासुदा वितेको ।<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
म चलचित्रकर्मीको हैसियतले काठमाण्डूमा काम गर्दैथिएँ । केही सिनेमा बनाइसकेको थिएँ राम्रा नराम्रा । सफल असफल दुवै किसिमका । एउटा राम्रो सिनेमा बनाएर बासुदालाई देखाउने रहर थियो तर त्यो मेरो अनन्तिम थियो ।
'ही ईज नो मोर' एक अतीतकालीन मित्रको सन्देश फोनमा ।
खबर आउँदा म नेपालको नयाँ आन्दोलनमा सरिक नयाँ राजनीतिक पार्टीलाई पाँचहजार चन्दा दिँदैथिएँ । कमरेड खगेन्द्र वा कमरेड प्रभाकर विदा भएर गएको क्षण बासुदा त्यतिवेलै जानुभएछ ।
वासु भट्टाचार्य सम्पूर्ण हिन्दी सिनेजगतका सफल गुरु । सफल निर्देशक । आविष्कार, तीसरी कसम, तीसरा पत्थर, आषाढ का एक दिन, आस्था का निर्देशक । प्रख्यात फिल्मकर्मी विमल रायका चेला अनि ज्वाइँ ।
म वासुदाको शोकमा अन्तरित हुँदै थिएँ । दुःख जसका वारेमा लाखौँ गीत कविता वा इतिहास लेखिए होलान् तर अझै अपूर्ण । त्यही दुःखमा मैले बासुदालाई निमग्न भएर सम्झेँ । रोएँ ।
उनी मेरो जीवनको एक प्रिय अध्याय थिए । अध्याय बने । मैले यस्तै जेठ महिनाकै आलस्यपूर्ण घाममा उनलाई मुम्बईको बीआर स्टूडिओमा भेटेको थिएँ । उनी भर्खरै नेपाल गएर आएका थिए । म उनको नयाँ सिनेमा जुन नेपालमाथि बनेको छ हेर्न गएको थिएँ ।
सिनेमा हेरिसकेर बासुदाले दो टुक प्रश्न सोधे, “के नेपालको राम्रो फिल्ममेकर हुन सक्छु त ?”
मैले जवाफ नदिईकन हाँस्नु उचित सम्झेँ । हाँसे । उनले नेपालमा यो सिनेमा प्रदर्शन गर्न अब कति कसरत गर्नुपर्छ त्यसको पूर्व जानकारी उनलाई थिएन ।
फेरि उनले दोस्रो प्रश्न टप्काइहाले, “ के यो राम्रो नेपाली सिनेमा हुनसक्छ ?
उनले राम्रो भनेर सम्बोधन गरेको संकेत गुड भन्ने शब्द थियो ।
वास्तवमा शाही नेपाल चलचित्र संस्थानले नौलाख लगाएर बनाएको त्यो सिनेमा नेपाली सिनेमा हुन सकेन । यसको गुह्य राजनीतिमा दरवार निकटस्थ दुई शाह परिवारको टक्करले बेकाम गर्यो । पछि यो सिनेमाले भारतबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रविष्टी पायो तर नेपालको नाउँ उल्लेख गर्न शानेचसं सफल हुन सकेन । हो, म नेपाल र भारतको संयुक्तिमा बनको त्यो सिनेमाको पोष्ट प्रोडक्शनमा काम गर्न वासुदालाई भेट्न गएको थिएँ । म त्यही दिनबाट उनको चेलामा रुपान्तरित हुँदैछु भन्ने ज्ञातसम्म थिएन ।
बासुदाले मलाई कुनामा लगेर भने यो सिनेमालाई नेपालीपन दिने एउटा मात्र तरिका छ, त्यो हो भाषा । \_\_\_"द्याट यू ह्याभ टु डू, म्यान ।\_\_\_"<?xml:namespace prefix = u1 />
उनले मलाई पुरै विश्वासका साथ त्यो सिनेमाको पटकथा र सम्बादको पाण्डुलिपि हातमा दिए । अब यो काम आजैबाट सुरु गर्नू भने ।
पैसा कति, मैले सोध्नै नपाई उनले आफै भने ‘बाहिर कूकीलाई भेट्नू । हि विल फिक्स यूअर रिम्यूनिरेशन । ’ कुकी उनका म्यानेजर ।
कुकीले मेरो पारिश्रमिक तोके । म सुनेर खुशी कम चकित बढी भएँ । पैसाको वारे मैले आफै नसोधेको ठीक भएछ । नमागेको राम्रो भएछ, मागेको भए कम पो माग्ने थिएछु । पैसाको मलाई जोड खाँचो थियो । म महिनाको दुई हजारमा एउटा स्टूडिओमा काम गर्थेँ, त्यो काममा कमा लागिसेको थियो । अब म दोस्रो इनिङ सोच्दै थिएँ, त्यो यहाँ हुन आईपुगेछ ।
एकैपटक उनले मलाई बाह्रहजार भने । मलाई रिङटाजस्तो लाग्यो, भोक पनि लाग्यो । मेरो अनुहारमा देखिएको अनुभावबाट उनी विस्मित भए र त्यो वेला कुकीले सोधी हाले, “के भो, कम भो ? ... वासुदासित काम गर्ने मौका तिम्रो लागि ठूलो हो । ”
उनी के के भन्दै थिए, मैले कति बुझेँ , कति बुझिनँ । वासुदा कुकीका निम्ति ठूला मान्छे थिए होला तर मेरा निम्ति उनी कति ठूला थिए त्यो कुकीको उँचाइबाट हेरेर पत्ता लाग्दैन थियो ।
भोलिपल्टबाट म बासुदाको कारको पछिल्लो सीट हुँदै होटल सि रकको डविँग थिएटरको हलमा पुगेँ, त्यहाँ पनि म उनको पछिल्लो सीटमै बस्न पुगेँ ।
करिव बीसबाइस दिन मैले बासुदाको सहायक भएर सि रक होटलको चिया, खाजा, नाश्ता र लञ्च खाएँ । कहिले अघाउञ्जेल, कहिले भोक लागुञ्जेल । के खाने, के नखाने मलाई थाहै हुँदैनथ्यो । वासुदासित बसेर खाँदा धेरै कुरा सिक्थेँ । केही न केही उनीबाट ज्ञान संवरण भइरहेको हुन्थ्यो । कहिलेकाहिँ उनको मंगलवाणी कानले सुन्थेँ , हृदयमा लेख्थेँ । पछि घरमा आएर कलमले डायरीमा लेख्थेँ । उनी धेरै अर्थमा मेरा गुरु भए ।
मेरो धेरै किताब पढ्ने बानी प्रति उनलाई चिढ थियो । भन्थे, धेरै रंगको कलम बोक्ने मान्छे एकाउन्ट हुन्छ , विद्धान हुन्न ।
एकदिन उनले मेरा हातका किताब हेरेर भने, मिष्टर हिमाल । संसारमा दुइटा किताब पढे पुग्छ । यति धेरै पढ्नै पर्दैन ।
म सँधै उनीसित नेपाल र हिमालको धेरै कुरा गर्ने भएर उनी मलाई व्यँग्यपूर्वक मिष्टर हिमाल भनेर बोलाउथे ।
केही दिनपछि उनले ती दुई पुस्तकको नाउँ भने, शेक्सपियरको हेनरी फिफ्थ र लुइगी पिरान्डेलोको सिक्स् क्यारेटर इन द सर्चर अफ अर्थर ।
ती दुइटा किताब यो जमीनमा मैले कहिले पढिनँ । त्यो नै मेरो गुरुभेँटी भयो उनका निम्ति । हा हा हा ।।
एकदिन यो कुरा उनैलाई हाँसेर मैले सुनाएँ, उनले मृदु मुस्कानकासाथ सुने तर बोलेनन् । उनमा रीस, राग, र बदला मैले कहिले देखिनँ । र, मप्रति पनि उनको वैरभाव त्यसपछि पनि र त्यसअगि पनि कहिले देखिनँ ।
वासुदा कविता साहित्य खूब बुझ्ने मान्छे । तर कविलेखकलाई माया नगर्ने भनेर उनलाई चिनिन्थ्यो । किनकि उनले कविको पैसामा बनेको पहिलो फिल्म तीसरी कसमलाई चुर्लुम्म डुबाइदिएको आरोप थियो । गीतकार शैलेन्द्रले गीत लेखेर कमाएको पैसामा राजकपूर, वहिदा रहमान अभिनीत तीसरी कसम बासुदासित बनाएका थिए । सिनेमा नचलेर निर्माता शैलेन्द्र खुस्किए तर त्यो दुर्दान्त घटनाको गाली आजसम्म पनि वासुदा खपिरहेका छन् । साहसी मान्छे वासुदा ।
गुरुदत्त पछि शैलेन्द्रको मृत्यु हिन्दी सिनेजगतको लोकप्रचलित तर अलोकप्रिय कथा हो । सजनवा झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है गीत लेख्ने शैलेन्द्र मर्नुको दोष वासुदाको थाप्लोमा आयो , उनी त्यसका शिकार भए । उनी भन्छन्, “शैलेन्द्र गए पछि फिल्म चल्यो तर मैले के गर्ने ? ”
साँच्चै फिल्म खूब चल्यो , हाम्रा धु्बचन्द्र गौतमले त त्यस फिल्मका वारेमा विमर्श र प्रस्तुति पत्रिकामा पानाका पाना लेखेकापनि छन् । साँच्चै राम्रो यात्रा फिल्म हो ।
वासुदा हिन्दी, अँगे्जी, उर्दू र बँगाली कुनै पनि भाषा सहजतापूर्वक बोल्न सक्थे । हिन्दी उनी अड्की अड्की बोल्थे । अँग्रेजी घमण्डले बोल्थे, तर आफनै लवजमा । उनी मनले बोल्नु पर्यो भने बँगालीमा बोल्थे । बँगाली उनको मातृभाषा थियो । अरु जुनसुकै भाषामा बोले पनि बासुदाको एउटा भाषा बुझ्न सजिलो थियो, उनको हृदयको भाषा । उनी स्पष्ट बोल्थे, आँखा ओठ र हाँसोबाट एकैपटक ।
वासुदाले बोलेपछि सामान्य मान्छे बोल्नै सक्तैनन्, सम्मान्य मान्छे उनीसित तर्क गर्नै चाहँदैनन् । अति सामान्य मान्छे त उनी बोलेपछि सुन्न मात्र योग्य ठहरिन्छन् , त्यसमध्ये म पनि एक पर्थेँ । मेरो ज्ञानले त्यही भन्छ ।
उनी जस्तै विद्धान, चोर, डाँकूलाई पनि आफ्नो बोलीमा तह लगाउन सक्थे । त्यस्तै एउटा घटना मैले धर्मयुग साप्ताहिकमा उनकै पढेको थिएँ । दसवर्षअगि छापिएको उनको यो समाचार उनलाई मैले एकदिन सुनाउँदा उनी चकित भए चिच्याएका थिए,
“एई यहाँ हेर एउटा एलई । ”
वासुदालाई यस्ता पुराना–विराना कुरा सुनाएर म हैरान पारिरहन्थेँ । उनी पहिलो मान्छे थिए जसले मलाई एल आइ नाम दिएको, जुन नाउँले म अझै जीवित छु । एलआइको अर्थ हुन्छ, लिविँग इन्साइक्लोपेडिया ।
धर्मयुग साप्ताहिकको त्यो घटना साहै सानो अक्षरमा सम्पादकीयको छेवमा एक कुनामा छपिएको थियो । घटना यस्तो थियो, उनी चम्बल घाटीमा तीसरा पत्थरको छायाँकन गर्न गएका । त्यतिवेला त्यहाँका कुख्यात डाँकू मलखान सिंहलाई उनले थप्पड हानेको विस्मित कथाका उनी साहसी नायक थिए ।
त्यो घटना मैले उनलाई हुबहु सुनाउँदा उनी त खुशी भए उनका अन्य चेला चपेटा मसित दूर भए । मलाई उनैले सतर्क बनाए, यसो भनेर, इमानदारी तिम्रो चरित्र हो भने ठीक छ । नीति हो भने तिमी चाकरी गर्दैछौ ।
म त्यही दिन तरङ्गित भएँ, ई भलामानुषसित ।
वासुदाले मलाई काम दिए, ज्ञान दिए । जीवन जिउने वृहत्कला सुक्ष्म कोणले सिकाए । उनी जान्दथे, जीवन जिउने हरेक कला । उनी आफ्नो शर्तमा बाँच्न जान्ने एक कुशल कलाकार ।
उनलाई उनका सजातिय शूड भन्थे, छली । मलाई लाग्छ, उनले जीवन जिउने क्रममा यस्ता धेरै शर्टकर्ट अपनाए जसले गर्दा उनी कसैका नजरमा स्वार्थी, कसैका नजरमा उग्रअह्मी , कसैका नजरमा जीनियस देखिन्थे ।
उनी मेरा प्रिय लेखक मोहन राकेशका घनिष्ठ मित्र तर कटु आलोचक । दुवैको सम्बन्धीकरण व्यावसायिक मोडमा आएर छताछुल्ल भयो । लेखक कवि उनका प्रिय पात्र थिए तर सीमितताको आधारमा । पञ्चवटी बन्दै गर्दा उनीसित भारतका दुई लेखक वरपर थिए, पञ्चवटीका कथाकार कुसुम अञ्सल र सम्बाद लेखक नवेन्दु घोष । ती दुवैसित दादाको सम्बन्ध विजुली र पानीसित जस्तै थियो ।
पञ्चवटीमा तीनजना महिला उनका नजीक थिए, निर्माता शोभा डाक्टर, अभिनेत्री अनुराधा तरफदार र लेखिका अंशल । ती तीनैजना मध्ये उनी अनुराधासित अति नजीक र आत्मीय थिए । यो कुराको खुलासा एकदिन उनले गायक उदीत नारायण झासित गरे, तिम्री पत्नी पनि एयर होस्टेस हुन् हैन र ?
उनले हो भन्ने वित्तिकै दादाले भने,“ यहाँ काममा लिएर नआऊ है, एयर होस्टेस मेरो जीवनको कमजोरी हो । ऊ.. अहिले सम्म अनुराधासित म छुट्न सकेको छैन । ...”
अनुराधा तरफदार त्यतिवेला इन्डियन एयरलाइन्समा कार्यरत थिइन् भने उदीतकी जीवनसंगिनी हाम्री गायिका दीपा गहतराज, एयर इन्डियामा । उदीत र दीपासँगै त बस्थे तर लिभिन् फ्रेन्डका रुपमा । बैधानिक विवाह नभएको अवस्था थियो त्यो ।
वासुदाले हाँसेर भने, “दुवै एयर लाइन्सको सेवा मलाई अपार लाग्छ ।”
उदीत सौभाग्यवश भोलिपल्टबाट काममा आउन छोड्यो उस्लाई आफ्नी हुनेवाला पत्नीको माया लागेको हुँदो हो ।
वासुदाले मलाई एकदिन ठ्टटामा सोधे, “तिमी कहिले देखि मलाई चिन्थ्यौ मिष्टर हिमाल ?”
मैले सज्जनतापूर्वक आँट गरेर भनेँ, “जुन दिन तपाईको नाउँ स्टार राजेश खन्नासित जोडिएर आयो । र, त्यो दिनदेखि इज्जतले लिएँ जुन दिन तपाइँले दिलिपकुमार सित सिनेमा बनाउँदिन भन्नु भो ।”
यि दुई घटनामा अघिल्लो खतरापूर्ण थियो भन्नु वा उनलाई सुनाउनु तर पनि उनलाई मैले भनेँ । उनी बलिऊडमा राजेश खन्नाजस्तै चर्चित थिए, वाइफविटर अर्थात् पत्नीपीडकका रुपमा । उनी पत्नीलाई पिट्नेमा कहलिएका थिए । मैले त्यो घटना गर्वले सुनाएँ ।
सानो केटो अलि उच्छृङ्खल कुरो ,उनलाई शायद पचेन तर उनले देखे ममा रहेको पहाडी कठोरपन अनि नेवारमा पाइने सांस्कृतिक कोमलपन । राजेश खन्ना रक्सी खाएर स्वास्नीलाई पिट्थे भने बासुदा कुरैकुरामा निहुँ खोजेर । बासुदाकी पत्नी रिँकी भट्टाचार्य एक चर्चित पत्रकार अनि प्रसिद्ध फिल्मनिर्देशक विमल रायकी छोरी । अनि अमिर खानलाई होली फिल्ममा ब्रेक दिने आदित्य भट्टाचार्यकी आमा । तैपनि परिचय त कुटाई खाने पत्नीका रुपमा व्यापक र विस्तार थियो । म भन्न चाहन्नथेँ, बासुदाले मलाई सोधी हाले । सिनेपत्रकार देवयानी चौवाल, भारती एस प्रधान वा खुशवन्त सिंहले यसवारेमा प्रशस्त लेखिसकेका थिए प्रभुजीका वारेमा । मैले सबै वेलीविस्तार लाइदिएँ उनी चूप भए । केही वेर पछि भने , “एलईको सब मालूम है । ”
त्यो घटनापछि पनि वासुदा र मेरो वीचमा हाँ र ना मा मात्र कुरा हुनथाल्यो । तर उनले मलाई माया गर्न छोडेनन् , भन्थे, यो खतरनाक छ तर इमानदार छ है ।
उनको यो मंगलवाणी उनका सबै आसेपासेले ग्रहण गरिसकेपछि मेरो परिचयीकरण अलि बेग्लै हुँदै गयो ।
बासुदा मसित जे पनि कुरा गर्न चाहन्थे, म खुल्ला हुन्थेँ । कहिले त्यो मोहन बगानको फुटबलको कुरा होस् वा इडन गार्डेनको मौमडियन झगडा वा फुटबलर श्याम थापाको ब्याक् भलि । वा, कुनैदिन सत्यजित रे को प्रतिवन्धित सिनेमा सिक्किम को कुरा । वा, उनले बनाएको इन्दिरा गान्धी वृत्तचित्रको कुरा, श्रीमती गान्धीले उनको निर्देशन नमानेर तस्वीर साडीको सप्कोले पुछ्न नमानेको कुरा । कहिले विनाप्रसँग सैलारी र मोजार्टको द्वन्द्वको कुरा । कहिले बहादुर शाह जफरका पत्नी र छोराले ब्रिटीशसित मिलेर गरेको षड्यन्त्रको कुरा । यस्ता अनेकाअनेक विषयमा हामी छलफल गथ्र्यौँ तर उनी हार्न नजानेपनि रमाउथे । म चैँ अलि बढी उनलाई मनोरञ्जन दिइरहेकोजस्तो महशूश गर्थेँ , त्यो मेरो कैशोर्यपन मलाई मनपथ्र्यो । म कहिलेकाहिँ सतर्क पनि हुन्थेँ उनको अति आत्मीयताबाट । मुम्बई रजतपटमा त्यतिवेला नाम चलेका गे (समलिङ्गी) हरु देखापरिसकेका थिए, संगीतकार अजीत बर्मन जसले भर्खरै उदीतनारायण झालाई मकहाँ आउँदा सँधै हाफ प्यान्ट लगाएर आउनु है भनेर उदीतको सातो खाइसकेको थियो , चरित्र अभिनेता जानकीदास अनि अभिनेता दीपक पराशर पनि चर्चामा थिए त्यस्तो उग्रगामी भूमिकामा ।
वासुदा त त्यस्तो हैन, म सोच्थेँ । अचम्म लाग्थ्यो त्यो मेरै गुरुप्रति कस्तो डर ??
बासुदा एक असल गुरु पक्कै थिए उनका चेला बासु चटर्जीको टीभी धारावाहिक रजनी त्यतिवेला हिट थियो दूरदर्शनमा । अरु पनि उनका चेला उनलाई भेट्न आउथे । समकालीन उनलाई परबाट माया गर्थे ।
हामी सँगै काम गरिरहँदा एकदिन एउटा अशुभ खबर आयो, स्मिता पाटिलको देहान्त भयो भन्ने, हामी चकित भयौँ , एकतीसवर्षको उमेरमा एक कलाकारको नष्ट । म त रोएँ, वासुदा त रोएनन् बरु भने तर्कातीत भएर, एकतीसवर्ष प्रतिभाशाली कलाकारलाई कठीनवर्ष हो । संगीतकार शुबर्टलाई हेर । ”
चुनौतिले भरिएको कुरा पनि उनी हाँसेर सुनाउथे , त्यो उनको क्षमता थियो । समानतामा भन्दा समान अवसरमा विश्वास गर्ने बासुदा कलकत्तालाई राजीव गान्धी सरकारले गरेको अपमानप्रति सदैव आक्रोशित हुन्थे ।
राजीव गान्धीमा कुनै सम्भावना छैन उनी भन्थे तर भारतीय सिनेमामा उनी प्रशस्त काम गर्न सकिन्छ उनको दावा हुन्थ्यो । उनी हिन्दी सिनेमालाई सूत्रमा हैन, संरचनामा ढाल्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्थे तर उनको आफ्नो सूत्र चै हिन्दी सिनेमामा कहिले काम आएन भन्थे उनी ।
पञ्चपटी पछि बनाएको आस्था उनको स्मरणीय चलचित्र हो तर चलेन । राजेश खन्नालाई लिएर बनाएको आविष्कार नचल्नुमा उनी भारतका पहिलो सुपरस्टार राजेश खन्नाको उग्रअहम्लाई दोष दिन्छन् ।
एकदिन यथार्थवादी फिल्मनिर्देशक मुजफ्फर अलीको अञ्जुमन हेर्न होटल सी रकको प्रिव्यू थिएटरमा हामीलाई निम्ता आयो । 'उमराव जान' बनाएर ख्याति कमाएर बसेका अलीको यो फिल्म महत्वपूर्ण थियो यसमा पहिलो पटक शबानाले गीत गाएकी थिइन् ,फैज अहमद फैजको । मुजफर अलि नाना पाटेकरलाई हिन्दी सिनेमामा मौका दिने एक सार्थक निर्देशक थिए । फिल्म धीमा गतिमा थियो , मेरो लागि त त्यो समय धीमा भएकोमा खुशी नै थिएँ । त्यहाँ भएका एकेक हस्तिसित मेरो परिचय हुँदै थियो पहिलोपटक । नायिका शबाना आजमीसित मेरो काठमाण्डूमै परिचय पनि भएको र झगडा पनि भइसकेको थियो, त्यसैले नवीनीकरण गर्नु परेन । अरु त मेरा निम्ति आकर्षण नै थिए ।
फिल्म सकेपछि चियापान चल्यो । गफगोष्ठि चल्यो । त्यस्तो चलन थियो त्यहाँ त्यतिवेला । तर वासुदा त फिल्म नै छोडेर गइसकेका थिए म त एक्लो परेँ ।
पछि थाहा भो उनलाई फिल्म निकै बोर लाग्यो रे । उनी गए पछि मपनि एक्लै फर्केँ ।
आज धेरै दिनपछि सम्झिन्छु, सिनेमा नीतनवीन प्रयोग गर्न रुचाउने वासुदा किन सारा काम अधुरो छोडेर छिटै गए , आफ्नै समकालीन भन्दा छिटो ।
एशियाई सिनेमामा पहिलो पटक विवाहेतर सम्बन्धमा खुला बहस गर्न सक्ने फिल्मकार आफ्नै जीवनको सम्बन्धमा, परिणयको प्रकरणमा केही नबोली चूपचाप किन गए ?
म अझै पनि मौनतापूर्वक त्यही कुरा सोच्दैछु ।